13°28′00″S 49°41′00″E﻿ / ﻿13.466670°S 49.683330°E﻿ / -13.466670; 49.683330
Isam-ponina 7 848 mponina
Bobakindro dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Vohemar, Faritanin'i Antsiranana. Ny isam-poniny dia 7848 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 71609 ary ny kaodin-distrika dia 716
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia coco. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia banane. Ny isan'omby dia 16000. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia cafe. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 99 ny mponina no miasa tany. 0 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha.
Tapaka in-3 ny lalana tao anatin'ny taona 1999-2001. Ny isan'ny vakitrano tanatin'ny taona 1999-2001 dia 17.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bobakindro&oldid=952862"